Ukucaciswa kunye nokunikezelwa ngokusemthethweni kweHuawei Nandipha i-9e evuzayo | I-Androidsis
IHuawei Yonwabele iiNgcaciso ezi-9e ezivuzayo
El IHuawei Yonwabele i-9e yi-smartphone elandelayo eza kukhutshwa ngo-Matshi 25, kunye ne Yonwabela i-9S kunye ne-5 MediaPad M2019 yoHlelo loLutsha.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, uHuawei ukhuphe iposta yovavanyo etyhila ezinye zeenkcukacha kunye noyilo oluyinxalenye lwefowuni. Ngoku, ezinye izinto zalo ziye zavuza kunye nokunikezelwa kwazo okusemthethweni. Sandisa ngezantsi.
Ngokwinto enokubonwa emva kokuvuza, iHuawei Nandipha i-9e iza kuza ne 6.08-intshi ediagonal HD + bonisa ngenotshi enye Umbethe kunye ne-bezel engezantsi eshinyeneyo.
Iinguqulelo ezisemthethweni zityhila oko izakuza ngemibala emithathu: isafire eluhlaza okwesibhakabhaka, ezinzulwini zobusuku emnyama kunye nokwahluka okumnyama ngombala ngokufanayo IHuawei Y6 Pro (2019). Ngokwenyani, zozibini ii-9e kunye ne-Y6 Pro (2019) babelana ngoyilo olufana ncam kunye nenkcazo ethile.
Ifowuni inikwe amandla yi-MediaTek's Helio P35 octa-core processor, eyaqala kwi Xiaomi Mi Dlala. I-chipset idityaniswe ne-3GB ye-RAM kunye ne-32GB okanye i-64GB yendawo yokugcina yangaphakathi enokwandiswa ukuya kuthi ga kwi-512GB ngekhadi le-microSD slot. Inekhamera yangemva kwe-13 MP ene-f / 1.8 aperture kunye ne-8 MP ngaphambili yekhamera ene-f / 2.0.
Ukonwabela i-9e kuya kuba nebhetri ye-3,020 mAh. Kwakhona, njenge-Y6 Pro (2019), ayinaso isithwebuli somnwe. Inkqubo yokusebenza ayikhankanywanga, kodwa silindele ukuba iqhube i-EMUI 9.0 ngokusekwe kuyo I-Android 9 Pie Ngaphandle kweBhokisi. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba iza kufika nge-Android Oreo, kodwa iya kuba nohlaziyo lwexesha elizayo kwi-OS OS yamva nje. Siza kuqinisekisa zonke iinkcukacha ngeentsuku nje ezimbini, nge-25 ka-Matshi, kulapho esi sixhobo siza kuba semthethweni kunye nazo zonke iinkcukacha zaso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IHuawei Yonwabele iiNgcaciso ezi-9e ezivuzayo
Thatha kwaye uguqule izidalwa kule RPG evulekileyo ebizwa ngokuba yi-Evertale